Tsenan’i Mahamasina: tratran’ny polisy ireo vehivavy mpanendaka sy mpangarom-paosy | NewsMada
Par Taratra sur 22/01/2021
Maro ireo mpiantsena mitaraina ho voaharom-paosy na voaendaka. Omaly kosa, ravan’ny polisy ny andiam-behivavy mpanao asa ratsy isaky ny tsenan’alakamisy etsy Mahamasina. Vehivavy ihany koa ny tena lasibatr’izy ireo.
Tsy fanaka malemy intsony ireto vehivavy ireto raha ny zava-bitany! Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, mody mamonjy tsena rehefa isaky ny alakamisy eny Mahamasina ireto vehivavy ireto ka manao andiany mihitsy izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny. Mitsofoka mihitsy any anaty tsena miaraka amin’ireo mpiantsena izy ireo mandritra izany. Mitondra zava-maranitra izy ireo ka ny sasany, mody mitankisina amin’ireo mpiantsena variana mijery entana, ny hafa kosa, manataka poketra amin’ny “lame”. Misy hatrany anefa ny lamina efa napetraky ny polisy amin’ny fanaraha-maso ireo mpanendaka sy ny tontakely rehefa andro tsena toy izany, isan’izany ny fisian’ireo polisy manao fanamiana sivily miditra any anaty tsena manara-maso ireo jiolahy. Tsy nampoizin’izy ireo ny fisiana polisy mifangaro amin’ny mpiantsena any anaty tsena ka tsy afa-nihetsika intsony ireto jiovavy ireto niaraka amin’ireo entana nokasainy halaina. Fantatra fa efa avy nanataka sy nanaraka mpiantsena izy ireo mialoha izao nahatraran’ny polisy azy izao.
Malaza ratsy koa eny Behoririka…
Tsy eny Mahamasina ihany fa isan’ireo mampitaraina ireo mpivarotra sy mpiantsena koa ny fisian’ireo andiam-behivavy mangalatra amina toeram-pivarotana eny Behoririka sy manendaka ireo mpiantsena. Ny sasany, mody mampiresaka ny mpivarotra, misy kosa ireo maka ny entana mipetraka eo amin’ny fitoeran’entana. Efa maro ireo tratran’ny polisy teny amin’iny faritr’i Behoririka iny. “Mila mailo hatrany isika rehefa mivoaka miantsena fa ny ratsy, tsy kely lalana”, hoy ny polisy. Midika izany fa tena misy ny miralenta satria tsy ny jiolahy ihany no manao ny ataony fa hita amin’izao fa na ny vehivavy aza, tsy jerena intsony amin’ny maha fanaka malemy fa diniho amin’izao.